Help talk:Contents/Barressu Jalqabu - Wikipedia
Help talk:Contents/Barressu Jalqabu
=Accounti Ban[Lakkaddaa gulaali]
Ammaf garru akkam akka barresani bekkuf kana dubis:-
Fakkenaf english wikipedia irra gara afaan oromotti jijjiruf, duran english wikipedia ->  banni. Boxii search jedhu kessatti wa'e waan baresiitu barbadi. bakka biratti yokan window birratti oromo wikipedia bani. akka log in tate duraan dursii ilalli. english wikipedi irratti log in ta'u hin barbachisu.
Itti anni immo oromo wikipedia irratti box jirru kan bitta ketiit argamu kan Fufi fi Barbadu jedhu qabu kessatii waan atti barresu fettu qubee sirri ta'en barressi. Achii immo Fufi kan jedhu tuqqi yokan bani. Kunis garra fulla biratti si gessa. Fulli kuni fulla wanna odeffano suni qabu si banu danda'a, haa ta'u malle yoo odeffanon suni hin jirrane ta'e atti barresu ni dandetta jechu dha.
Itti anni create this page kan jedhu bani. yerro tokko tokko create this pageiin argamu dhabu danda'a, yerro akkanatti maqqa suni kan dimman diqatte barefamet jirra, suni bani. yerro kana bakki duwwa guddan tokko dhufaa. bakki itti baresitus bakka sunit.
Ergaa barresitte xumurtee bodda gara gaddi bu'i Save Page kutta jedhu tuqqi.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Help_talk:Contents/Barressu_Jalqabu&oldid=23476"
This page was last edited on 25 Bitootessa 2014, at 00:21.